महिला पुरुष खोजी खोजिरहेको सम्बन्ध मा वर्गीकृत
म छु फीट अग्लो संग पुष्ट निर्माण, एकल महिला को वर्ष पुरानो, विवाह कहिल्यै, म छु हेरचाह, राम्रो लिस्टिंग, परमेश्वरको डर मान्ने, र एक सकारात्मक छ ।, केट नाम द्वारा एकल विवाह कहिल्यै, म छु र त म छु र मायालु लेडी छु र म साँच्चै देख लागि र प्रेम । म खोजिरहेको छु एक गम्भीर सम्बन्ध नेतृत्व गर्नेछन् विवाह लागि खोजी संग एक राम्रो र मायालु मानिस एक नयाँ जीवन सुरु गर्न बुद्धि छ । म हुँ एक सरल र तल पृथ्वीमा, सजिलो जा र सजिलो कृपया.
म छु केट. एकल र विवाह भएको कहिल्यै अघि, परिश्रमी र स्वतन्त्र जवान महिला, लागि खोजी मेरो प्राण जोडीलाई छ । परिपक्व एम. म हुँ एक विशेष महिला हुन चाहनुहुन्छ कि प्रेम र हेरचाह को द्वारा एक मानिस जसले हुन खोजे एकल म खोजिरहेको छु कि जो मानिस हुन चाहन्छ । छु गरेर नाम. देख को लागि एक गम्भीर सम्बन्ध छ । गम्भीर बारेमा बैठक सही व्यक्ति । म मिटर तल पृथ्वीमा व्यक्ति गर्न, र धेरै सजिलो. खोजी गर्न पाउन, एक जिम्मेवार मानिस भनेर म प्रेम गर्न सक्छौं, कदर र फिर्ती मा नै छ । म चाहनुहुन्छ एक मानिस बनाउन सक्छ भनेर मलाई जस्तै महसुस एक महिला । म साँच्चै आवश्यक एक विश्वसनीय मानिस । जो हुन सक्छ विचारशील मलाई म हुँ एक अद्भुत, एकल महिला संग सुनको हृदय, एक महिला तपाईं गर्न प्रेम थियो. नमस्ते, म छु कल म छु वर्ष पुरानो निष्कपट र महिला को लागि देख एक सत्यवादी र मानिस एक गम्भीर सम्बन्ध सुरु हुनेछ भनेर.
हिस्पानिक महिला देख को लागि एक सम्बन्ध वा केही मजा हुन कृपया सारासोटा मा
तस्वीर र सम्पर्क जानकारी मा विज्ञापन. नमस्कार अभिवादन तपाईं रुचि हो भने एक दीर्घकालीन प्रेम सम्बन्ध गर्न सक्छन् जो निश्चित विवाह गर्न नेतृत्व गर्न सक्छन् तपाईं प्राप्त गर्न मलाई, म चाहनुहुन्छ गर्न. प्रकारको निष्कपट विचारशील रोमान्टिक र भावुक र चतुर । म कहिल्यै खेल खेल्न । म पाउन चाहन्छौं एक असल मानिस साझेदारी गर्न जीवन खुसीसाथ. हरेक माध्यम भएको छ एक धेरै जीवन मा विशेष गरी जब तपाईं छन् पुरानो रही छ । मध्य एक सभ्य मानिस प्राप्त गर्न बताउनु छ ।
← दक्षिण कोरिया अतिथि च्याट कोठा बिना दर्ता
मेक्सिको: भाग्यो च्याट बालिका देखि कोरिया →